Mobile House: gsm ဖုန်း တွင် အင်တာနက်အသုံးပြုနိုင်ရန် setting ထည့်ခြင်း
gsm ဖုန်းတွင်အင်တာနက် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်...speed ကတော့ download ကို 1 second = 1 kb to4kb အထိပဲ ရပါတယ်..idm နဲ့ download လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့4kb to 15 kb ထိရပါတယ်.
..sony ericsson ဖုန်းနဲ့ ဆိုရင် ကွန်ပြူတာနဲ့ ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်...nokia နဲ့တော့ မစမ်းသက်ရသေးပါ...sony ericsson တွင် setting ထည့်နည်း ပြောပြချင်ပါတယ်..
.ပထမဆုံး internet setting တွင် accect point name ကို mpt ဟုထည့်ပါ.
..APN name ကို mptnet ဟုထည့်ပါ....username နေရာတွင် mpt ဟုထည့်ပါ...password မလိုပါ...proxy လည်းမလိုပါ...ထို့နောက် ဖုန်းကို ပိတ်ပြီး ပြန်ဖွင့်ပါ..
connection bar/ဖုန်း နက်ဝေါ့ တိုင်ဘေးနားတွင် E ဟု ပေါ်လာပါက အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ...
ထိ်ု့နောက် browser ထဲဝင်ပါ...setting တွင် access point နေရာတွင် mpt ကိုရွေးပါ..www.google.com ကို အရင်သွားပါ..အင်တာနက်အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ...website လိပ်စာကို တိုက်ရိုက်ထည့်သုံးပါက လိုင်းနှေးသောကြောင့် မတက်တာများပါတယ်..google သို့ အ၇င်ဝင်ပြီး search box တွင် သွားလိုသောလိပ်စာကို ထည့်ပြီး ရှာပြီးမှ ကျလာသော လိပ်စာကို ၀င်တာက ပိုမြန်ပါတယ်...gmail ကို သုံးလိုလျှင် google တွင် gmail ဟု ရိုက်ပြီး ရှာလိုက်ပါ...gmail လိပ်စာ ကျလာလျှင် ၀င်လိုက်ပါ...gtalk အသုံးပြုလိုလျှင် google တွင် ebuddy ဟုရိုက်ပြီး ရှာလိုက်ပါ..ebuddy website ၀င်ပြီး software ကို download လုပ်ပါ..မိမိ ဖုန်းအမျိုးအစားကိုရွေးပါ..software ကို ဖုန်းတွင် download လုပ်ပြီး အသုံးပြုပါ..
ကွန်ပြူတာနက် ချိတ်လိုလျှင် ဖုန်းကို ကွန်ပြူတာနှင့် ကြိုးဖြင့်ဆက်ပြီး network setting - streaming setting တွင် access point တွင် mpt နှင့် usb setting တွင် usb ethernet ဟို ပြောင်းပြီးသုံးပါ..ကွန်ပြူတာနှင့်ချိတ်လိုက်သည်နှင့် အင်တာနက်နှင့်အလိုလိုချိတ်ပြီး ဖြစ်ပါလိမ့်မည်..
ဆက်သွယ်ရေးတွင် ဖုန်းလိုင်း လျှောက်ပြီး ၂ရက်လောက်ကြာမှ လိုင်းပွင့်ပါသည်... လိုင်းပွင့်သည်နှင့် ဖုန်းလိုင်းမမိတမိ ဖြစ်နေပါလိမ့်မည်..အင်တာနက်မသုံးလိုပါက မလျှောက်တာပိုကောင်းပါသည်...ဖုန်းလိုင်း ကွန်နက်ရှင်ပါကျသွားလို့ပါ..အင်တာနက်သုံးလျှင်လည်း အိမ်တွင်းတွင် သုံးလျှင် လိုင်းမမိတတ်ပါ...အထက်ပါ setting ထည့်ခြင်းကိုလည်း လမ်းပေါ်/ အိမ်ရှေ့ဝရန်တာ လိုင်းအပြည့်မိသောနေရာတွင် စမ်းပါ..မဟုတ်လျှင် လိုင်းမတက်ပါ....
Posted by Mobile House at 12:26 AM
Labels: နည်းလမ်း, ဗဟုသုတ